YEYINTNGE(CANADA): Monday, February 04
အစွန်းရောက် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်မည်ဟုဆို
by အသောက အသောက အသောက ...................................................... အစ္စလာမ်စစ် အစွန်းရောက်များကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ နှင်ထုတ်တော့မည်ဟုဆိုပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများကိုလည်း ခေါင်းမြှီးခြုံခွင့် မပေးပါဘူး။ အခုလဲ ပြင်သစ်ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေနဲ့ စစ်ဖြစ်နေပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/04/20130အကြံပြုခြင်း
Photo: Credit to Kyi Kyi Winn
ကြာသပတေးနေ့ ကနေစပြီး လယ်သမားတွေကို ရိုက်နှက်မယ် ခုတ်ထစ်မယ်
by Nay Wai(နေမျိုးဝေ-မတူကွဲပြား)
မဖယ်ပေးရင် သူ့အလုပ်သမားတွေကို ဓါးကောတုတ်ကောသုံးပြီးချခိုင်းမယ်
ဒီသတင်းကို -ဇေကမ္ဘာ၀န်ထမ်းတွေကလည်း အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်
Daw Aung San Suu Kyi meet with Mr. Jin-Yong Cai ; Vice President and his delegation ,The World Bank at Thinaha Hotel (Naypyidaw) at 5:30- 7:30 pm on 4-2-2013
ရန်ကုန်-မော်လမြိုင် တစ်နာရီသာကြာမည့် မြန်မာ့ပထမဦးဆုံး လျှပ်စစ်သံလိုက်ရထားပြေးဆွဲမည်
မြန်မာနိုင်ငံ လယ်သမားများအရေး ဆွေးနွေးပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံလယ်သမားများအရေးဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ရွှေလီလမ်း
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာတွင် ၂၀၁၃၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၃)ရက် နေ့လည် (၁)နာရီအချိန်က ပြုလုပ်ကျင်းပစဉ်။
မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစိုးထွန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လယ်သမားများ တနေ့ ထမင်းသုံးနပ်စား၍ အကြွေးဆပ်
မြန်မာနိုင်ငံ လယ်သမားနှင့်အလုပ်မားဆိုင်ရာ အဖွဲ့စည်းများတက်ရောက်
မလေးရှား မည်သည့်နေရာတွင်မဆို တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားပေးကြပါ
Min Lwin Min Lwin's photo.
သူငယ်ချင်းများအားလုံး မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သရင်း ကူညီပြီး share ပေးကြပါလို့ ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.ဒီပုံပါသူမ မလှလှဝင်း (မှတ်ပုံတင်နံပါတ်-၅/ရဥန(နိုင်)၀၂၀၀၇၈. စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ရေဦးမြို့နယ်၊ရွာသာလေးကျေးရွာ မှသည် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ (၃)လပိုင်း၂၀၁၂ ၀န်းကျင်မှရောက်ရှိပါသည် သူသည် ဆေးမအောင်သဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အီပို့မြို့သို့ အလုပ်ပြောင်းခဲ့ပါသည်.အလုပ်မကောင်းလို့ မြန်မာရှိသော (ဧဂျင့်)တခုကိုအကူညီတောင်းခဲ့ပါသည်.ပြောင်းတော့ပေးပါသည် နောက်ရက် ဖုန်းကိုခေါ်လို့မရတော့ပါဘူး (ဧဂျင့်)ကိုသွားမေးတော့လဲ အလုပ်ခွင်မှာ ဖုန်းမပြောရဘူးဆိုပြီး ဖုန်းသိမ်းထားလို့လို့ပြောပါတယ် မင်းတို့အဒေါ်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ် နောက်ကြာလာတော့ ငါတို့တွေ့ချင်တယ် ခေါ်ပေးပါလို့ပြောတော့ မအားသေးလို့ ခေါ်ပေးပါမယ်ပြောပြီး နေ့ရွှေ့ညရွှေ့နှင့် ကျွန်တော်တို့မှာလဲ လက်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ ဘာမှလဲလုပ်လို့မရဘူး ဘာလုပ်ရမှာမှန်းလဲမသိပါဘူး သူ့တူတစ်ယောက်ဆို ရဲစခန်းကိုသွားတိုင်တော့လဲ စကားကလဲကောင်းကောင်းမပြောတက်နဲ့ နောက်ပြီး ရဲများနှင့်(ဧဂျင်း)များကလဲ လက်ပေးလက်ယူတွေကလဲရှိထားကြတယ်ထင်တယ် (ဧဂျင်း)ကိုသိရက်သားနှင့်တောင် လိုက်ပြီးမေမြန်းမပေးကြဘူး..သူမလဲ ဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှန်းလဲမသိတော့ပါဘူးဗျာ. နောက်ဆုံး ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ မလေးရှား အီပို့မြို့ တစ်ခွင်နှင့် မလေးရှား မည်သည့်နေရာတွင်မဆို တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ...ဆက်သွယ်ရမည့်သူများ.မလှလှဝင်း ၏တူ မောင်ကျော်နိုင် ဖုန်းနံပါတ်/0103963336..ညီဖြစ်သူ မောင်ဝေဖြိုး ဖုန်းနံပါတ်/0103979775..ကျွန်တော် ကိုကျော် ဖုန်းနံပါတ်/0165510273...share ပေးကြပါနော်.....ကျေးဇူးတင်ပါသည်
`ပိတောက်ချောင်းဆိပ်ကမ်းရှိ အောင်သုခဧရာသဘောင်္နှင့်ဆီတွဲမီးလောင်မှု လူလေး ဦးသေဆုံး´
ရန်ကုန် မြို့ လှိုင်မြစ် တွင် ဆီတင်သဘောင်္ မီးလောင်တဲ့ မြင်ကွင်း။ (၄)ဦးသေဆုံးကြောင်း သတင်းရရှိ။ ရန်ကုန် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက် ။
ယနေ့ညနေ ၅ နာရီခန့်ကလှိုင်မြို့နယ် ၊ ခိုင်ဟိုလီဒေါက်ကျင်း ၊ပိတောက်ချောင်းဆိပ်ကမ်းအနီးရှိ အောင်သုခဧရာ သဘောင်္မီးလောင်မှုတွင်လက်တလောရရှိသည့်သတင်းအရ လူ၎ ဦးသေဆုံး ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုမီးသတ်ဦးစီးဌာနမှသိရသည်။
လက်ရှိတွင် သေဆုံးသည့် သဘောင်္သားများ၏ အလောင်းများကိုတွေ့ရှိထားပြီး အဆိုပါ အလောင်းများကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြိး သို့ ပို့ဆောင်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရသည်။
အောင်သုခဧရာသဘောင်္ ဆီဖြည့်စဉ် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားသဘောင်္နှစ်စင်းအား ၀င်တိုက်ခဲ့ရာမှ ဆီတွဲတစ်စီးမှာရေလယ်တွင် မီးလောင် နစ်မြုပ်သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကျန်တစ်စီးဖြစ်သည့် မြ၀တီသဘောင်္ပေါ်မှ လူသုံးဦးသေးဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှသိရသည်။
မီးလောင်မှုအား ညနေ ၆နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် ငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည့်စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဖြစ်ပွားရာသို့ သွားရောက်သတင်းရယူနေသည့် ပေါ်ပြူလာနယူစ်သတင်းထောက်က ပေးပို့သည်။
နှစ်ဖက်စလုံးပဲ သိပ်ဟန်မဆောင်ကြပါနဲ့ ။
ဖေဖော်ဝါရီ (၄)ရက် ရွှေလီ တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးမှုအပြီး ကေအိုင်အို အစိုးရ
ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ ထုတ်ပြန်သော
ဒုက္ခသည်စခန်းက ကလေးငယ်တွေဟာ ဟန်မဆောင်နိုင်ပါဘူး ၊ ရှိရာ ကျွေးရာ ကောက်စား နေရပါတယ် ။
ဟန်တွေ ပန်တွေ မလုပ်ပဲ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ဝေစား မျှစား လို့ရမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆီ ရအောင် ဦးတည်ကြပါ ။ အရေးကြီးတာ သေနတ်သံတွေ ၊ ဗုံးသံတွေ ရပ်ဖို့ပါ ။
ကြာသပတေးနေ့ ကနေစပြီး လယ်သမားတွေကို ရိုက်နှက်မယ် ခု...
ရန်ကုန်-မော်လမြိုင် တစ်နာရီသာကြာမည့် မြန်မာ့ပထမဦး...